ပါရာဂွေး vs ချီလီ - ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ | ဘောလုံးခန့်မှန်း | လောင်းကစားအကြံပေးချက်များ
ပွဲစဉ်ရက်စွဲ: 1 စက်တင်ဘာ 2017 | Posted: 31 သြဂုတ် 01:43 2017 GMT +2| သိမှတ်ဖွယ်ကြည့်ရှုအားပေး 3197 ကြိမ်.
ပါရာဂွေး vs ချီလီ – ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ
ပါရာဂွေး vs ချီလီ – ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ , ချီလီနှင့်အတူစားပွဲပေါ် 4th များမှာ 23 မှတ်. သူတို့ဟာကမ္ဘာ့ဖလားရောက်ရှိရန်သေချာမျှအားဖွငျ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အကောင်းတစ်ဦးလမ်းကြောင်းကိုအပေါ်များမှာ. သူတို့ရဲ့ succes မှ Key ကိုသူတို့ရဲ့နေအိမ်ဖျော်ဖြေပွဲပါပြီ, သူတို့ခုနစျပါးကိုအနိုင်ပေးထဲကငါးမှတျတမျးတငျထားသာတစ်ချိန်ကဆုံးရှုံးခဲ့ရဘယ်မှာ. လည်း, သူတို့ကဒီ year`s Confederations Cup အပေါ်ကောင်းတစ်ဦးပြေးခဲ့, သူတို့ဂျာမနီမှဆုံးရှုံးသွားသောရှိရာနောက်ဆုံးရောက်ရှိတော်မူပြီးမှ. သူတို့ကသူတို့တစ်တွေလွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ကသူတို့ကိုရက်စက်မှုတစ်ခုရှုံးနိမ့်မှုအတွက်သုံးမှတ် ယူ. ပြန်ပါရာဂွေးဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဒီဂိမ်းသို့ကွှလာနေကြပါတယ်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးအသင်းနှင့်အတူပြုလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်, Sanchez အဆင်သင့်ဖြစ်ကတည်းက, ဒဏ်ရာရသူ Edson Puch မှလွဲ. ရှိသမျှသည်အခြားသောကစားသမားများဖြစ်ကြသည်အဖြစ်.
ပါရာဂွေးနှင့်အတူ 8th များမှာ 18 မှတ်. သူတို့ဟာနေဆဲကမ္ဘာ့ဖလားရောက်ရှိဖို့သီအိုရီအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပေမယ့်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာအလွန်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်. ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၏သင်တန်းကျော်, သူတို့ခြုံငုံသုံးဦးသာအနိုင်ပေးမှတျတမျးတငျထား, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သုံးခုယှဉ်ပြိုင်ပွဲအတွက်လာမယ့်အတူ. လည်း, သူတို့ကထိုသို့ကာလအတွင်းလမ်းမပေါ်တွင်အာဂျင်တီးနားရိုက်နှက်နှင့်လည်းချီလီကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှစိတ်ဝင်စားဖို့က. ထိုကွောငျ့, သူတို့အကြိုက်ဆုံးအဘို့နေ့ရက်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်. ကွာသူတို့ရုန်းကန်ခဲ့ကြနေအိမ်ထဲကနေ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကစီမံခန့်ခွဲအခါတိုင်းစင်ကြယ်စာရွက်စောင့်ရှောက်ရန်, သူတို့တစ်ခုခုနှင့်အတူထွက်ခွာ. ပါရာဂွေးအများအပြားလူသိများတဲ့နာမည်များရှိ don`t, လူးကပ်စ Barrios သူတို့ရဲ့အဓိကကြယ်ပွင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ. ကျေးဇူးတင်စရာ, သူကဒီဂိမ်းများအတွက်ရရှိနိုင်.
ချီလီဂိမ်းသုံးမှတ်ရရှိရန်နှင့်သူတို့၏အနေအထားစောင့်ရှောက်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဝင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်အလားအလာစားပွဲပေါ်မှာထ. ပါရာဂွေးသူတို့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုရလဒ်ရဖို့လာကြလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုတစ်ခုခုနှင့်အတူထွက်ခွာကြည့်ဖို့ခဲယဉ်းသည်. ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ပို. အရည်အသွေးမြင့်အဖွဲ့ကဖြစ်ကြောင်း, နှင့်ပါရာဂွေးအောင်ခြင်းနောက်ဆုံးအချိန်ကိုယူသော်လည်းအဲဒီနှစျခုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့, ချီလီကဒီမှာတက်ချော်တွေ့မြင်ရန်ခက်ခဲသည်. သူတို့ရဲ့အရေးအပါဆုံးကစားသမားအဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့တစ်တွေမဖြစ်မနေ-Win အဖြစ်ဒီဂိမ်းကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်, အထူးသဖြင့်သူတို့အစဉ်အမြဲအနိုင်ရနေတဲ့လှည်ရာအရပျစျသောငါးရက်အကြာတွင်ဘိုလီးဗီးယားမှခရီးတို သိ.. ချီလီရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏အနိုင်ရသံသယသို့ရောက်မနေသင့်, ငါသည်သူတို့၏အနိုင်ရရှိတစ်ဦးအဆင်ပြေတဦးတည်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ရကတည်းကငါသူတို့နှင့်အတူ back ပါလိမ့်မယ် -1 အာရှဟန်းဒီးကပ်.
ဆောက်သမ်တန် vs ရှက်ဖီးမန်ယူ ( အောက် 2.5 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် & 1.72 )
Mallorca vs Ath Bilbao ( အောက် 2.5 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် & 1.50 )
ဆွီဒင် vs ဘူလ်ဂေးရီးယား